Dowladda oo bilowdey in ciidamada gobolka Baay mushaharkooda la gaarsiiyo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dowladda oo bilowdey in ciidamada gobolka Baay mushaharkooda la gaarsiiyo
Dowladda oo bilowdey in ciidamada gobolka Baay mushaharkooda la gaarsiiyo
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta mushaaraadkooda u qeybisay ciidamada DF ee ka howlgala Gobolka Baay.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya C/xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi oo saxaafadda shir jaraa’id u qabtay ayaa sheegay in maanta Ciidamada DF ee ku sugan Baydhabo iyo Deegaanka Goofgaduud loo qeybiyay mushaaraadkii ay xaqa ugu lahaayeen Dowladda.
Horey ayaa ciidamo gadoodsan oo ka tirsan ciidanka dowladda (Akhri) ee ku sugan magaalada baydhabo u gadoodeen kuwaas oo ka cabanayey in aan wax mushahar iyo daryeel ah la gaarsiin 6 bilood ee u danbeysey waxaana ay fariisin ka dhigteen Maanya fuulka oo ku dhaw Baydhabo.
Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidamada Xoogga dalka ayaa lacagta mushaarka geeyay Gobolka Baay kadib markii ay wefdi heer sare ah oo ka socda Dowladda ay booqasho hal maalin qaadatay ku tageen baydhabo.
Wasiirka oo ay socdaalkiisa ku wehliyeen Afar Xildhibaan,Taliyaha Milateriga iyo saraakiil kale ayaa maanta soo gebogebeeyay booqashadooda iyagoo isla galbta dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya C/xakiim Fiqi iyo wefdigiisa ayaa mudadii ay joogeen Baydhabo la kulmay Masuuliyiinta maamulka Gobolka,Saraakiisha ciidamada iyo qeybaha bulshada kuwaasoo ay kala hadleen dardar gelinta arrimaha amniga,Nolosha ciidamada iyo sidii Gobolka oo dhan looga saari lahaa cadowga Alshabab.
Shiinaha oo jawaab caro leh ka bixiyey go’aanki Tirifooyinka ee Donald Trump
Trump oo magacaabey la taliyihiisi saddexaad ee Amniga Qaranka
March 23, 2018 By Abdirizak Shiino
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay qaraxii ka dhacay Magaalada Muqdisho
March 23, 2018 By Mohamed Jeenyo
Shirka Golaha Wasiirada oo lagu Ansixiyey heshiisyadii Soomaaliya iyo Turkiga
March 22, 2018 By Mohamed Jeenyo
Qarax ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Barakacayaasha magaalada Baydhabo oo loo sameeyey biyo dhaamin-Dhegayso